Wararka Maanta: Axad, Oct 10, 2021-Qaali Maxamuud Guhaad "Madaxweyne Illaahey ka baq ee gabadheyda ii soo daay, ama haley toogto kuwii dilay"
Maamo Qaali ayaa madaxweyne Farmaajo ka dalbatay hadii gabadheeda ay nooshahay in loo soo daayo oo aysan jiri doonin wax dambe oo la isku qabsanaayo, hadii ay dhimatayna in cadaalada loo horkeeno dadkii dilkeeda ka dambeeyay.
“Kiiskaan wuxuu ku dhamaan karaa kaliya Ikraan oo Nolol lagu helo ama dadkii dilay oo inta maxkamad xukunto aniga oo u ujeedo oo waliba wajiyadooda arkaaya in Iskuul Polizia lagu Toogto”ayay tiri Maamo Qaali.
Waxay sidoo kale sheegtay in kiiska gabadheeda uu yahay mid Caalami ah oo aan aheyn sida loo maleeyo, islamarkaana waxay baaq u dirday Maxkamadaha Caalamiga oo ay ka codsatay iney soo faragaliyaan kiiska gabadheeda.
"Kiiska gabadheyda marnaba la xirmi doono oo waxa la is leeyahay habartaan meelaha ka qeylinee iyada iska aamusi doonto, taasi ma dhici doonto gabadheyda waxa cadaalad u raadinteeda u taagan aniga Aabaheed Faarax Tahliil adeeryeelkeed, abtiyaashed iyo dhamaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee madaxweyne ilaah ka baq ee gabadheyda isoo daaya hadey dambi ledahayna halagu qaado hadii kalana cadaalad haley marsiiyo dadkii dilay" ayay tiri Qaali Maxamuud hooyada dhashay Ikraan Tahliil.
Hadalkan kasoo yeeray hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo aheyd sarkaalad ka tirsaneyd NISA oo nolol iyo geeri lagu waaysana mudo laba bilood ah oo ay markii dambe NISA shaacisay iney shabaab dileen ayaa imaanaya kadib kulan ay la qaateen iyada iyo qoyskeeda Raysal wasaare Rooble oo ay ugu sheegayeen in caqabado adag ka hortaagan cadaalad u helida gabadheeda.
Maamo Qaali ayaa amaan iyo duco isugu dartay Raysal wasaaraha Soomaaliya oo ay sheegtay inuu marwaliba juhdi ku bixin haayo sidii ay cadaalada u heli laheyd gabadheeda Ikraan oo ay sheegtay inuu hortaagan yahay madaxweyne Farmaajo, waxaana xusid mudan in kiiskan uu sababay khilaafkii ugu darnaa ee soo kala dhexgala Farmaajo iyo Rooble.